Iimpawu zemackerel | Ngeentlanzi
Namhlanje kwakhona, siza kujonga uhlobo lwe intlanzi inomdla kakhulu kwaye, kwangaxeshanye, idume kakhulu. Sithetha, njengoko kubonisiwe kwisihloko sesithuba, malunga imackerel. Akukho sidingo sokukhankanya igama kabini. Ukuba siyithetha esidlangalaleni, siqinisekile ukuba uninzi lwabantu luya kuyazi ukuba luhlobo luni na.
IMackerel iye yaluhlobo lweentlanzi ezinobuntu bayo, kwaye zininzi iimpawu, nganye inomdla ngakumbi. Ngeli xesha, lo mfo ungowosapho lweScombridae. Ubuninzi bayo buzinzile, ngaphezulu kwako konke, kuLwandlekazi lweAtlantic kunye noLwandle lweMeditera, iindawo apho inokufumaneka khona kakhulu.
Su ukondla Isekwe kwezinye iintlanzi ezincinci, nangona ngexesha lasebusika zihlala zikwi-170 yeemitha ubunzulu. Nangona kunjalo, xa kufika ubushushu bunyukela phezulu, ekugqibeleni budibane kwiibhanki ezininzi kakhulu. Ngapha koko, esi simo sengqondo siyakothusa ngaphezulu kwesinye, ukuba ujonga ngqo.
IMackerel inomzimba ocekeceke, onemiphetho emibini eyahlukeneyo yasemaphandleni. Iimpiko zepectoral zifutshane. Asinakulibala isiphelo sempundu, esilandelwa ziimpiko ezisixhenxe. Inkqubo ye- umbala inombala oluhlaza okwesibhakabhaka, nenxalenye emhlophe. Ubude bayo buhlala phakathi kweesentimitha ezingama-25 ukuya kwezingama-45, kunye nobunzima obufikelela kwiikhilogram eziyi-4,5
Ezi kufuneka zibe ziinkcukacha ezaneleyo zokuveza imackerel ngokuchaneka ngokuchanekileyo. Musa ukuphosa izandla zakho entlokweni yakho, nangona zibonakala zimbalwa, inyani kukuba iintlobo zinokuthathwa njengezona zilula kakhulu, kwaye zinjalo igqibe. Ukulula kunomdla kakhulu.
Ukuphumla, kuyinyani ukuba i-mackerel ifumene ukuthandwa kwayo phakathi kwamaqela athile abantu, ngenxa yenxalenye enkulu yeempawu zayo. Sele sikuxelele ukuba inokuba yinto emangalisayo, ngenxa yoko siyakukhuthaza ukuba uyifunde ngokuchanekileyo, kuba uya kufumana izinto ezinomdla kakhulu.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Intlanzi enememori elungileyo
Umfanekiso - I-FlickR
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » I-mackerel eyaziwayo